Ngaba konke malunga neKhowudi enokuphinda isebenze? Umxholo ... Martech Zone
NgoLwesithathu, Julayi 15, 2009 Lwesine, Okthobha 29, 2015 Lorraine Ibhola
Andingo techy! Akunjalo, kodwa ndichitha ixesha elininzi malunga nabachwephesha bobuchwephesha, Douglas Karr. Esinye sezifundo ezibaluleke kakhulu endisifundileyo komnye wabadwelisi bendisebenza nabo, lixabiso lekhowudi enokuphinda isebenze. Ngelixa wonke umthengi ethanda ukucinga ukuba wahlukile, wachaza nje ukuba ubhale ikhowudi ukwenza inkqubo isebenze, ngaphezulu komthengi omnye uya kuba nakho ukusebenzisa inkqubo kunye nekhowudi.
Ingcinga efanayo Ikhowudi enokuphinda isebenze isebenza kwiimeko ezininzi ezahlukeneyo kubandakanya ukuthengisa. Ukusebenza nabanini bamashishini abaxakekileyo abathi abanalo ixesha lokubhala umxholo omtsha webhlog yabo okanye iwebhusayithi, ndibabonisa indlela yokusebenzisa umgaqo wekhowudi enokuphinda isebenze. Umzekelo: Ukukhutshwa kweendaba okanye ii-imeyile ezithunyelwe ukuphendula imibuzo kubathengi ziba ziincwadi zeendaba, iiposti zebhlog kunye nee-tweets. Akukho sizathu sokuphinda ulivuselele ivili, yenza nje into ebhaliweyo. Ngamanye amaxesha ikhowudi? okanye umxholo ufuna ukubamba kancinci kwibhlog yakho okanye kubaphulaphuli beendaba, kodwa xa sele unesiseko konke okunye kulula.
Kwaye kum, kulula ligama eliphambili. Ngaphandle kokuba ungumbhali oqeqeshiweyo okanye ibhlog, ezi zixhobo, WordPress, Twitter, UPlaxo, Umhlobo, Zonke iindlela zokufikelela esiphelweni. Kwaye isiphelo kukuba yonyusa inzala kwimveliso yakho, inkonzo okanye uphawu. Ngale njongo engqondweni, iqela lam lihlala lizingela izixhobo zebhlog ezintsha ukwenza lula kunye nokwenza lula inkqubo. Kwaye kubonakala ngathi zonke iiveki ezimbalwa enye isungula into entsha. Okwangoku iintandokazi zam TweetDeck kwaye Tweet Kamva.
TweetDeck ? Kuba silawula umxholo weakhawunti zabaxumi abaninzi, ndiyayithanda inyani yokuba ndinokwenza amaqela abafowunelwa okanye ukukhangela ngokwesiko kumthengi ngamnye. Olona hlaziyo lutsha lundivumela ukuba nditshintshe ngokulula ukusuka kumsebenzisi uye kumsebenzisi kunxibelelwano lwangempela.
Le ihlala iyindlela endikhetha ngayo yokunxibelelana kwi-Twitter, kodwa andikwazi ukuba kuyo yonke indawo ngaxeshanye, ke ndixhomekeke kwiTwitterLater ukugcina ukubonakala kwam xa ndingekho apho. Andikusebenzisi kangako kwiiakhawunti zam zeTwitter, kodwa kuyamangalisa abathengi abanjengemibutho yoqeqesho abanezibhengezo rhoqo kunye nohlaziyo lweklasi. Ukwabela umfundi ukuba enze lo msebenzi, sineeTweets zemihla ngemihla ezicwangciselwe ukuphela kukaSeptemba. Ndingatsiba xa ndinexesha elininzi, kodwa iTwitterLater igcina inqanaba lesiseko somsebenzi kum.
Ingcinga enye yokugqibela, kulula ukoyiswa lulo lonke ukhetho. Ingcebiso yam, khetha ezimbalwa ezisebenzayo, kwaye uzisebenzise kakuhle kwaye ziya kuvelisa iziphumo.